टोकियो मा5धेरै विचित्र रेस्टुरेन्ट यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, टोकियो
टोकियो यो एक आधुनिक, चपल, गतिशील शहर हो, जहाँ मानिसहरू जहिले पनि जहिले पनि जहिले पनि आउँछन् र हजारौं, हजारौं क्याफेहरू, बारहरू र रेस्टुरेन्टहरू। त्यहाँ सडक छैन जहाँ तपाईं खाने र पिउन ठाउँ देख्न सक्नुहुन्न, चाहे सानो किन नहोस्। जापानीहरूले हप्ताको हरेक दिन बाहिर खानपिन गर्छन् र तपाई पर्यटकको रूपमा पनि यस्तै गर्नुहुन्छ।
टोकियोसँग मिशेलिन सिताराहरूसँग धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन् किनकि ग्यास्ट्रोनोमी शानदार हो तर यसले अन्य कारणहरूका लागि विशेष र विशेष ठाउँहरू पनि राख्छ। जापानी लोकप्रिय संस्कृतिसँग सबै कुरा छ त्यसैले यहाँ सूची छ टोकियो मा पाँच धेरै विचित्र रेस्टुरेन्ट। भ्याम्पायरदेखि हलोसिनोजेनिक सपनाहरू निन्जास, रोबोटहरू र एलिस एन्ड वन्डरल्यान्डमा।
1 एलिस एक भूलभुलैया रेस्टुरेन्ट
2 क्रिस्टन क्याफे
3 निन्जा अकासाका भोजनालय
4 Kawaii दानव क्याफे
एलिस एक भूलभुलैया रेस्टुरेन्ट
यदि तपाईंलाई लुइस क्यारोलको कथाहरू मनपर्छ भने यो पेय पदार्थ र हल्का खानाको लागि बाहिर जानको लागि राम्रो ठाउँ हो। यो छिमेकमा छ जिन्जा, जापानी राजधानीमा सब भन्दा महँगो र एक विशेष हो, तर उनीहरूले पिउन जाँदा तपाइँको टाउको निकाल्नेछन भनेर नसोच्नुहोस्। इटालियन खानाको लागि औसत 40० यूरोको हिसाब गर्नुहोस्।
यो स्थान सोमबार देखि शुक्रवार सम्म साँझ5देखि ११.11.30० सम्म खुल्ला छ र सप्ताहन्त र छुट्टीहरूमा यो बिहान कफीको लागि बिहान ११::11० देखि साँझ 30 सम्म र फेरि to देखि ११::3० बीच खुल्छ। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, यो एकदम जिज्ञासु ठाउँ हो र जुनबेला तपाईं आइपुग्नुहुन्छ तपाईं एक मार्फत जानुहुन्छ एलिसको पुस्तकबाट पानाले कोरिडोर सजाइएको मूल चित्रणको साथ। भित्र टेबलहरू कार्डहरू हुन्, त्यहाँ एक आरक्षित छ कि छ विशाल शिक्षण र केटीहरू एलिस पहिरिछिन्।
जहिले जस्तो, भाँडाको प्रस्तुति उत्कृष्ट छ। तपाईं सबवेबाट आइपुग्नुहुन्छ, गिन्जा स्टेशनमा उही समान लाइनमा तल झर्दै, जुन केवल पाँच मिनेटको दूरीमा छ, वा जेआर यामानोटे लाइन लिन्छ र शिम्बाशीमा बन्द गरेर। यसले टाईयो भवन भित्र काम गर्दछ, F एफ --5-।। क्रेडिट कार्ड स्वीकार्नुहोस्!
टोकियो भ्रमण गरेका जो कोहीलाई थाहा छ कि शहरमा एउटा चर्च भेट्टाउन धेरै गाह्रो छ। त्यहाँ त्यस्तो छैन, स्पष्ट रूपमा होइन, तर जब तपाईं एक इसाई देशबाट आउनुहुन्छ तपाईं जताततै चर्चहरू र चैपलको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टको छवि परिदृश्यको अंश हो र यसैले मलाई यस्ता विपरित संस्कृतिहरू भ्रमण गर्न एकदम रोचक लाग्यो। तपाइँ बुझ्नुहुन्छ कि ईसाई पदमा विश्वको भौगोलिक स्थान जहिले पनि प्रासंगिक हुँदैन।
जे भए पनि, टोकियो मा तपाईं यो जान सक्नुहुन्छ क्याफे ईसाई आकृतिहरू संग सजाइएकोमैनबत्तीसहित मैनबत्ती, मखमली पर्दा, वाउलेट छत, मार्बल बार, पोलिश काठ वेदी, स्टेन्ड ग्लास विन्डोज, क्रिष्ट र भर्जिन मरियमको मूर्ति र यस किसिमको चर्चको सजावट। सबै एक संग गोथिक तिर स्क्रूको बारी ठिकै छ, त्यहाँ गरगोयलहरू, ताबूतहरू, केही हदसम्म घातक अ and्ग र विशेष नामको मेनू जुन धर्मलाई आतंकसँग मिल्छ।
ओसाकामा अर्को क्रिस्टन क्याफे छ, यो मूल हो, तर यो यति लोकप्रिय भयो कि आज त्यहाँ पनि छ शिबुया र एक Shinjuku। तपाईंसँग दुई छनौट गर्न छ! कफीको इन्चार्ज कम्पनीले भन्छ कि तपाईले जे देख्नुभयो त्यो यूरोप र ल्याटिन अमेरिकाबाट ल्याइएको हो तर यो हुन सक्छ चीन मा निर्मित। जे भए पनि, तपाइँ के देख्नुहुनेछ केटीहरूले गोथिक लोलिता शैलीमा लुगा लगाउँछिन् र जब रात झर्छ यो नाइटक्लब बन्छ।
शिन्जुकुको ठेगाना संकोचो हेम, -5-१-17-१-13,--F एफ हो। यो अपरान्ह 8 बजे देखि खुल्छ।
निन्जा अकासाका भोजनालय
निन्जास र जापान, एक मुटु। यो साइट सेवा गर्दछ उसले केवल खाने र निन्जा कार्यक्रम गर्दछ त्यसैले यो एक विशेष र रमाईलो रात हुन सक्छ। भित्र मध्यकालीन जापान को शैली मा लकड़ी र ढु stone्गा संग एक रेस्टुरेन्ट छ। निन्जहरूले तपाईंको अर्डर लिन्छन् र तपाईं समक्ष ल्याउँदछन्, चुपचापमा र देखा पर्दैछन् र हराउँदैछन् मानो तिनीहरू ती गोप्य मिशनहरूमा छन् जसको तिनीहरू नायकहरू थिए। तिनीहरू पनि केहि संग डिनर मनोरञ्जन तरवार वा मार्शल आर्ट शो।
यस स्थानको पेट्रोनोमी आधुनिक छ तर यसको सेवा गर्ने क्षणले के विशेष बनाउँछ किनभने निन्जा-वेटर यो एकदम नाटकीय छ। र यो सम्भव छ कि खानाले तपाईंलाई निन्जा ताराको सम्झना गराउँदछ कि धुवाँको गमहरूले तपाईंलाई सोधेको सुँघाहरू हुन् ... मजा! यो साइट नागाटा-चोमा, आकसका टोक्यो प्लाजा, १ एफ मा छ। यो सोमबार देखि शनिबार साँझ 1 बजे सम्म खुल्छ तर ढोका १०::5० सम्म बन्द हुन्छ, यद्यपि मानिसहरू मध्यरात सम्म रहन सक्दछन्।
तपाईं गिन्जा लाइन स्टेशन वा Marunouchi, Akasakamitsuke स्टेशन बाट मात्र तीन मिनेट पैदल बाट आउँछ। तिनीहरूको वेबसाइट बाट तपाईं बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
Kawaii दानव क्याफे
La kawaii संस्कृति यो सबै दुनिया मा लागू गरिएको छ। यदि दक्षिण कोरियाले के-पप निर्यात गर्दछ भने, जापानी निर्यात कवई संस्कृति उही तीव्रताका साथ। र सबै दुनिया का केटीहरू बकबक! यहाँ टोकियो मा तपाईं संग यो छ रेस्टुरेन्ट र क्याफे सुपर पागल।
यो एक LSD सपना जस्तो छ। तपाईं ढुoned्गा मा जान भने, हे भगवान! यो साइट को बारे मा छ सुपर quirky र रंगीन हाराजुकु छरछिमेकमा सेबास्टियन मसुदाले डिजाइन गरेको हो, अरू कहाँ? यस केटाले पहिले एउटा पसलको स्वामित्व लिए जुन धेरै लोकप्रिय भयो,%% डोकिडोकी, र पछि पप स्टार क्यायरी पाम्यु पामुसँग शिमुयामा रहेको क्याफे खोल्नको लागि बन्यो: कावाई मोन्स्टर क्याफे। तपाईं हिम्मत?
तपाईं एक राक्षसको खुला मुख बाट विशाल ठाउँमा आँखा भएको ठाउँमा क्याफेमा प्रवेश गर्नुहुन्छ विशाल टेडी बियरहरू, कपकेकहरू र सबै ठाउँमा मिठाईहरू। ठाउँ चार भागहरु मा विभाजित छ: दूध स्ट्यान्ड छ युनिकोर्न्स, बन्निहरू र मैनबत्ती होल्डर र बच्चा बोतलहरू; मशरूम डिस्को धेरै साइकेडेलिक एक विशाल छ बहु रंगीय च्याउ, साला मेल चियासँग म्याकारोनीको खम्बा छन् र बार एक्सपेरिमेन्टले ककटेलहरू पुर्‍याउँछ जुन भ्निसको बाहिरी भाग जस्तो देखिन्छ।
र स्टाफ तिनीहरूको पोशाक र तिनीहरूको दृष्टिकोणबाट धेरै पछाडि छैन त्यसैले तपाईंसँग डली, बेबी, क्रेजी, क्यान्डी र एक सेक्सी साइबोर्ग नामको नास्ट छ। ग्यास्ट्रोनोमी खाद्य रंगमा प्रशस्त हुन्छ। यो YM स्क्वायर, 4F मा छ।
टोक्योमा हाम्रो भर्खरको विचित्र रेस्टुरेन्ट / क्याफे भ्म्पायर संस्कृतिको वरिपरि घुम्छ। यो एउटा गाढा ठाउँ, रातो र कालो मखमल, कपालहरू, कफिनहरू प्रज्ज्वलित झूमर र एक सुंदर पतित वातावरण।
कर्मचारीले टक्सिडोस लगाउँदछन् र केटीहरूले फ्रेन्च-शैलीको सूट लगाउँदछन्। यो एक धेरै विस्तृत साइट हो त्यसैले यहाँ उनीहरूले बैटरीहरू राखेका छन् एक विशिष्ट भ्याम्पायर पुस्तक परिदृश्य पुन: निर्माण गर्न। मानौं तपाईं ब्र्याम स्टकर र उसको ड्र्याकुलाको ब्रह्माण्डमा पूर्ण रूपमा डुबेका हुनुहुन्छ। ध्वनि बारोक संगीत र मेनू ट्युन बाहिर छैन त्यसैले तपाईं केही मृत पसलहरू ला ला भान हेल्सिंग, ड्रेकुलाको अन्त्येष्टि कुकी मान्छेको आगोमा पकाइएको वा कपीएको रगतको साथ भेनिला मिठाई आदेश दिन सक्नुहुन्छ ...
क्याफेटेरिया क्रिसन काफे र एलिसियाको जस्तै समूहमा सम्बन्धित छ। यो साइट Ginza छरछिम, Lapeville 7F मा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » टोकियो » टोकियो मा5धेरै विचित्र रेस्टुरेन्ट